लकडाउनमा माक्स सिलाएर नाम र दाम कमाए पृथ्वी – रोल्पा समाचार
२०७७ बैशाख १, सोमबार १६:२९ गते
लकडाउनमा माक्स सिलाएर नाम र दाम कमाए पृथ्वी
रोल्पा समाचारदाता on २०७७ बैशाख १, सोमबार १६:२९ गते
बैशाख १ सुलिचौर
हरेक मानिसहरुलाई लक डाउनमा समय विताउन, दिन कटाउन निकै कठिन परिरहेको बेलामा रोल्पा सुलिचौर रुइनीबाङका पृथ्वी नेपालीलाई भने दिन वितको थाहाँ नै हुँदैन । बरु पृथ्वीलाई विहान कति चाडै हुन्छ, रात कति छिटो पर्दछ भन्ने कुराले चिन्चित बनाइरहेको छ ।
विगतको भन्दा पनि लक डाउनको बेलामा निकै व्यस्त रहनुभएको छ । आजकालको छोटो दिन करिव ५ बजे उज्यालो हुन्छ । उहाँले भन्नुभयोः–‘विहानै उज्यालो भइसकेको हुन्छ, त्यतिबेला निद्रा न पुगेको हुँदैन, कति छिटो उज्यालो हुन्छ, रात पनि कति छिटो पर्दछ । खाना खाने समय पनि पाइदैन ।’
रोल्पा जिल्लामा पनि लकडाउनको बेलामा सबै क्षेत्र सुनसान बनेको छ । त्यतिबेला पृथ्वीलाई त कुनै फूर्सद छैन । विहान क्षितिज नखुलकै बेलामा उठ्नु हुन्छ अनि राती अबेर निद्रा नलाग्दासम्म टेलर्समै काम गरेको बताउनुभयो । पृथ्वीले विहानै उठेर पसलमा जाने र दिनभरी माक्स सिलाएर बस्ने गर्दछन् । उहाँलाई माक्स सिलाएर नै समय विताउने गर्दछन् । एक्कासी सुनछहरी गाउँपालिका, लुंग्री, सुनिलस्मृतिबाट अडर आएपछि यो संकटको बेलामा आम्दानीतर्फ भन्दा पनि सेवा पनि गर्न भित्रैदेखि आयो र सेवाको काममा जुत्नुभयो ।
लकडाउनको बेलामा रोल्पा जिल्लाको विभिन्न स्थानीयनिकायको तर्फबाट आफूलाई करिव १० हजार वटा माक्स सिलाउन अडर आएको थियो । १० हजार वटा माक्स सिलाउनको लागि निकै हतार रहेको छ । त्यसैले पृथ्वीले कुनै कामको प्रवाह नगरी सिलाई रहनुभएको थियो । १० हजार वटा माक्स सिलाउनको लागि आफूसँग रहेको जनशक्तिलाई पनि परिचालन गर्नुभयो । आफूले पनि सिलाउनुभयो, र १० वटा माक्स तयार गर्नुभयो । एउटा माक्र्सलाई ३० मा विक्री गर्नु हुन्छ । १० हजार माक्स तयार गर्दा करिव ३ लाखको कारोवार भएको बताउनुभयो ।
लकडाउनको बेलामा पृथ्वी परियारले केही दिनमै ३ लाख कमाइ गर्नुभयो । लक डाउनको बेलामा समय कसरी विताउला भन्नु पनि भएन, आर्थिक आम्दानी पनि भयो समय पनि वित्यो त्यसैले हामीले समय अनुसारका लघु उद्यमहरु पनि गरेमा समय पनि वित्ने आर्थिक आम्दानी पनि हुने छ । त्यसतर्फ ध्यान दिनु पर्दछ । त्यसैले पृथ्वी सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गरेर कामसंगै नाम एवं सेवाको भावनाले ओतप्रोत हुन जरुरी छ ।
त्रिवेणी ७ गैरीगाउँमा सामुदायिक बनले ७७ परिवारलाई राहत
त्रिवेणी गाउँपालका कार्यालय रोल्पाद्वारा कोरोना भाइरसबाट बच्न र बचाउन विभिन्न गतिविधि सञ्चालन
जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पाद्वारा सार्वजनिक सुनवाई रेशम बि.क.१ असोज, लिबाङ ।जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पाले आज सार्वजनिक सुनवाइ कार्यक्रम लिबाङमा सम्पन्न भएको...
रोल्पा घर्तिगाउँ खोलबाङमा एम्बुलेन्स दुर्घटना
Author रोल्पा समाचारदाताPosted on २०७८ श्रावण ३०, शनिबार ०४:३१ गते २०७८ श्रावण ३०, शनिबार ०५:३७ गते
रोल्पा घर्तीगाउँको खोलबाङमा एम्बुलेन्स दुर्घटना३० साउन, रोल्पा । माडी गाउँपालिक घर्तिगाउँ बजार नजिक खोलाबाङमा स्मृति अस्पतालको एम्बुलेन्स बिहान करीव ३ः०० बजे...
प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा नेपाली कांग्रेस पार्टीको शुभेच्छुक संगठनहरुको मौन प्रर्दशन
Author रोल्पा समाचारदाताPosted on २०७७ माघ २४, शनिबार १३:२६ गते २०७७ माघ २४, शनिबार १३:२७ गते
प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा नेपाली कांग्रेस पार्टीको शुभेच्छुक संगठनहरुको मौन प्रर्दशनमाघ २४ गतेलिबाङ–रोल्पा संघीय सरकराको प्रधानमन्त्री खद्क प्रसाद शर्मा ओलीले गत पुसको...
Author रोल्पा समाचारदाताPosted on २०७८ जेष्ठ ३१, सोमबार ०४:३६ गते
रोल्पा समाचारदाताजेठ ३० दलित महिला सचेतन केन्द्र ड्वाक नेपाल र समता फाउण्डेशनको आर्थिक सहयोगमा रोल्पा नगरपालिका वडा नं. १ र ४...
भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र रोल्पाद्वारा वार्षिक कार्यक्रम सार्वजनिक
Author रोल्पा समाचारदाताPosted on २०७८ कार्तिक १२, शुक्रबार १३:४६ गते २०७८ कार्तिक १२, शुक्रबार १३:४९ गते
भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र रोल्पाद्वारा वार्षिक कार्यक्रम सार्वजनिक १२ लिबाङ–रोल्पा ।लुम्बिनी प्रदेश सरकार नेपाल मातहत कार्यालय भेटेरिनरी अस्पताल...